बेलुका ७ बजेपछि यात्रुबाहक गाडी चलाउन रोक – YesKathmandu.com
शुक्रबार १४, असोज २०७३
खोटाङ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न खोटाङमा बेलुका ७ बजेपछि यात्रुबाहक गाडी चलाउन रोक लगाइएको छ ।
सडक कालोपत्रेको प्रारम्भिक चरणको काम गरिरहेकै ठेकेदार कम्पनीलाई बिग्रेका सडकखण्ड मर्मत गर्ने जिम्मा दिइएको प्रजिअ कार्कीले जानकारी दिनुभयो । अहिले जिल्लाका सबैजसो सडक वर्षाका कारण अवरुद्ध छन् । रासस
साकुरा नेपालद्वारा विद्यार्थीहरुलाई शुभकामनासहित विदाइ कार्यक्रम
देशले दुई–चार दिनमै निकास पाउँछ : कोइराला
एमाले विवाद मिलाउन महासचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन
मिनेन्द्रलाई जोगाउन उषा गुरुङ सक्रिय,लेखा समितिमै जुहारी !
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अचानक विराटनगर प्रस्थान
मधेस घटना छानविन आयोगमा एउटा मात्र उजुरी !
मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा